अाज नेइमारको अग्नि परीक्षा, उत्तीर्ण होलान् कि अनुत्तीर्ण ? – Everest Dainik – News from Nepal
अाज नेइमारको अग्नि परीक्षा, उत्तीर्ण होलान् कि अनुत्तीर्ण ?
मस्को । विश्व फुटबलका त्रिमूर्ती (रोनाल्डो, मेसी र नेइमार) मध्ये दुई जना रसियामा जारी विश्वकप फुटबलबाट घर फिर्ता भइसकेका छन् । मेसी र रोनाल्डो घर फिर्तापछि सबैको नजर अब नेइमारमा छ । उनी पनि आजै घर जालान् या विश्वकप जिताएर ? चाँसोको प्रश्न बनेको छ ।
आज नेइमारको अग्नी परीक्षा हुने छ । उनी परीक्षा उत्तीर्ण होलान् या नहोलान् ? यो प्रश्नको छिनोफानो साँझ हुँदैछ । १९९० देखि ब्राजिलले प्रत्येक विश्वकपको क्वाटर फाइनलमा स्थान बनाएको छ । के आज नेइमार यो रेकर्ड सुरक्षीत राख्न सक्लान् कि नसक्लान् ? ठूलो प्रश्न छ । त्रिमूर्तीमध्ये दुई वटा घर गइसकेकाले अब नेइमारको यात्रा कहाँसम्म पुग्ला सबैको साँझा प्रश्न छ ।
ब्राजिललाई आजको खेल जित्न पक्कै सजिलो छैन । किनकी ब्राजिलसँग भिड्ने मेक्सिकोले लिग राउण्डमा साविक विजेता जर्मनीलाई हराएर यो स्थान बनाएको हो । तर, ब्राजिलको टिमलाई यसअघि भएका दुई खेलमा शानदार जित निकालेकाले आत्मविश्वास धेरै छ । त्यसकारण पनि मेक्सिकोलाई हराउन ब्राजिलले कुनै कसर बाँकि राख्ने देखिन्न ।
ब्राजिललाई मेक्सिकोको प्रदर्शनबारे पूर्ण जानकारी छ त्यसैले उसले आफ्नो लक्ष्य भेटाउन त्यहिअनूरुप प्रर्दशन गर्न सक्छ । ब्राजिलसँग नइमार बाहेक कोटिन्हो, थियागो सिल्वा र गेब्रिएल जिसुसजस्ता बलिया खेलाडी पनि छन् । मेक्सिकोले लगातार सात पटक विश्वकपको प्रीक्वाटर फाइनलमा स्थान बनाएको छ । उसले अन्तिम पटक स्वीडेनलाइ हराएको थियो ।
मेक्सिकोले अहिलेसम्म विश्वकपमा केवल दुई पटक क्वाटर फाइनलको यात्रा तय गरेको छ । उसले १९७० र १९८६ मा अन्तिम आठमा प्रवेश गरेको थियो । ब्राजिल भने १३ पटक क्वाटर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । -एजेन्सी
ट्याग्स: Brazil, Brazil Football